लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेकपा जिल्ला नेतृत्व तय, पूर्व एमालेबाट र माओवादी कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेकपाले जिल्ला नेतृत्वको प्रस्ताव तयार गरेको छ । पार्टी एकीकरण भएको १० महिनासम्म गुटगत झमेलाका कारण जिल्ला नेतृत्व तय हुन सकेको थिएन । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको सहयोगमा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिल्ला नेतृत्वको प्रस्ताव तयार पारेका हुन् ।दुई अध्यक्षले तयार पारेको प्रस्ताव आइतवार बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको छ । दुई अध्यक्षले पूर्व एमालेबाट ५७ र पूर्व माओवादीबाट ४३ प्रतिशत हुनेगरी जिल्ला नेतृत्व तय गरेका छन् । ७७ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवको सूचि तयार भइसकेको छ ।
पूर्व एमालले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्व माओवादी पक्षले सचिव पाउनेछ भने पूर्व माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्व एमालेले सचिव पाउने भएको छ । महासचिवको परामर्समा दुई अध्यक्षले तयार पारेको प्रस्ताव आज सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ भने अन्तिम निर्णयका लागि स्थायी कमिटीमा लैजाने तयारी गरिएको छ । सचिवालयले पारित गरेपछि स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन हुनेभएको छ ।
जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउन नेकपामा निकै सकस परेको थियो । प्रदेश कमिटी गठन भएलगतै जिल्ला नेतृत्वको लागि सिफारिस मागिएको थियो । प्रदेशको सिफारिसका आधारमा नभई दुई अध्यक्षको तजबिजीमा जिल्ला नेतृत्व चयन गरिएको छ । जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउन स्थायी कमिटीबाट कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदल पनि काम गर्न नसकेकाे भन्दै बिघटन भएको थियाे ।
भंग भए विप्लवका पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटि, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । चन्द समूहले पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान चलाउन भन्दै स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो भंग गरेको छ । केही […]
को हुन् पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई ? यस्तो छ उनको इतिहास
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीका रुपमा […]